Reddit Website မှ Tech Hacks နည်းများ - iT Guider
Reddit က နာမည်ကြီးဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်အသုံးမပြုကြသေးတာတွေ့ ရပါတယ်။ Reddit မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ရှိပြီး Life Hacks နည်းတွေ၊ Tech Hacks နည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Reddit မှာတွေ့ ရှိရတဲ့ Tech Hacks နည်းများထဲကကောင်းတဲ့နည်းတွေကို မျှဝေပါတယ်။
Gmail အကောင့်တစ်ခု ထဲနဲ့Online Accounts တွေများစွာဖွင့်ပါ။
Website or Web Service တစ်ခု မှာ အကောင့်နှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အကောင့်များစွာဖွင့်ဖို့Gmail အကောင့်တစ်ခုထဲကိုအသုံးပြုလို့ ရတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား? သင့် Gmail အကောင့်မှာ Plus Sign ထည့်ပြီး Gmail အကောင့်ကို ပွားပြီးသုံးလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ သင့် Gmail အကောင့်က [email protected] ဆိုပါစို့ ။ [email protected] လို့ ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ပြီးအကောင့် နောက်တစ်ခု ဖွင့် လို့ ရပါတယ်။ [email protected] လို့ ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Website or Web Service က အသုံးမပြုရသေးတဲ့ အကောင့်တစ်ခု လို့ အထင်မှားစေပါတယ်။ [email protected] လို့ လိပ်စာပြောင်းလိုက်ပေမယ့်လည်း Website or Web Service ကပို့ တဲ့ အီးမေး က [email protected] ဆီကိုပဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Number Keys , J , K, L ကိုသုံးပြီး YouTube ကြည့်ပါ။
သင့် Keyboard က Number Keys တွေဖြစ်တဲ့ 1 to9ကိုသုံးပြီး YouTube Video တွေကို 10% to 90% ကျော်ကြည့်လို့ ရတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား? ဒါ့အပြင် J , L key ကိုသုံးပြီး Video ကို ၁၀ စက္ကန့် စာ Rewind , Fast Forward ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ K key ကိုနှိပ်ပြီး Play/Pause လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့် Smartphone ကို ပေတံလို အသုံးပြုပါ။
Smart Ruler ဟု PlayStore ပေါ်တွင် ရှာဖွေကာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်
တစ်စုံတစ်ခုကိုတိုင်းတာဖို့ ပေတံ ရှာမနေပါနဲ့ တော့။ သင့် Smartphone မှာ Ruler Wallpaper တစ်ခုကိုအသုံးပြုရင် သေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းပျောက်သွားရင် အဆက်အသွယ်ရအောင် Wallpaper မှာ သင့် ရဲ့ အီးမေး၊နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ် တွေကို ရေးသားထားနိုင်ပါသေးတယ်။
ပိတ်ထားတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေကို ကြည့်ဖို့Google Translate ကိုသုံးပါ။
ဒီနည်းကတော့ သိတဲ့သူတွေ သိကြသလို မသိတဲ့သူတွေ လည်း ရှိပါတယ်။၀က်ဆိုက်တစ်ခု ကို ပိတ်ထားလို့ ကြည့်မရဘူးဆိုရင် www.translate.google.com ကိုသွားပြီး ကြည့်မရတဲ့ ၀က်ဆိုက်လိပ်စာကိုထည့်ပေးပါ။ဒါဆိုရင် အဲဒီဆိုက်ကို သင်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို Smartphone Stand အနေနဲ့ အသုံးပြုပါ။
Video Chat ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Movie ကြည့်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် Smartphone Stand တစ်ခုလို နေလား? သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို Smartphone Stand အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Laser Pointer ကို Smartphone Camera အတွက် Macro Lens အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
သင့်မှာ အသုံးမပြုတော့တဲ့ Laser Pointer တစ်ခု ရှိရင် သင့် Smartphone Camera အတွက် Macro Lens အဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Laser Pointer ထဲက Lens ကို ထုတ်ပါ။ Hairpin တစ်ခု နဲ့ Tape တစ်ခု ရှာပါ။ Lens ကို Hairpin ကြားမှာညှပ်ပြီး သင့်ဖုန်းရဲ့ Camera Lens မှာတပ်ဆင်ပါ။ Tape နဲ့Hairpin ကို ပတ်ပါ။ဒါဆိုရင် ပိုက်ဆံလုံးဝမကုန် တဲ့ DIY(Do It Your Self) Macro Lens တစ်ခု ရရှိပါပြီ။
Presentations တွေအတွက် သီးခြား User Account တစ်ခုအသုံးပြုပါ။
သင့် Laptop ကိုအသုံးပြုပြီး Presentation တွေပြုလုပ်နေကျဆိုရင် User Account ကိုသီးခြားအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင် Presentation ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Email, Messenger တွေက Notifications တွေတက်လာပြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။Windows, Mac, Linux အားလုံးမှာ သီးခြား User Account တွေပြုလုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Printer ကိုစမ်းသပ်ဖို့Google ကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့ အသစ်စက်စက် Color Printer ကိုစမ်းသပ်ဖို့ အတွက် Browser ကိုဖွင့်ပါ။ Google.com ကိုသွားပြီး Print ထုတ်ကြည့်ပါ။ Google Logo မှာ Color မျိုးစုံပါရှိပါတယ်။
Reddit မှာ Tech Hacks နည်းတွေ များစွာရှိပြီး အခုဖော်ပြထားတာတွေက အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူမှာလည်း အင်တာနက်ကနေ လေ့လာထားတဲ့ Tech Hacks, Life Hacks နည်းတွေရှိရင် လည်း မျှဝေခဲ့ပါအုံး။
Reference : Makeuseof
IT News Tips & Tricks
သင့် ဖုန်း ဘက်ထ္ထရီ အားကုန်တာ မြန်နေပြီဆိုရင်…?